Inaad kala hadasho waalidkaa da'da ah ee ku saabsan sidii aad guriga uga heli lahayd gargaar - Meals on Wheels
La yeelashada wadahadalka waalidiintaada gaboobay ee ku saabsan helitaanka caawimaad guriga
Qoraalka maqaalkani waa kii ugu dambeeyay ee taxane saddex qaybood ah oo ku saabsan daryeelka waalidiinta da'da ah. Fiiri Qeybta 1, “Sida loo go'aamiyo haddii waalidiintaada da'da ah ay ka faa'iideysan karaan xoogaa taageero dheeraad ah” iyo Qaybta 2, “Maxay yihiin ilaha ay heli karaan kuwa daryeela waalidiinta gaboobay?”
Waad iska xaadirisay oo waxaad aragtay calaamado muujinaya in qofka aad jeceshahay uu ka faa'iidi karo xoogaa taageero dheeraad ah oo guriga ah. Hadda waxaa la joogaa waqtigii lala yeelan lahaa wadahadalka waalidkaa ama ayeeyadaa.
Ha ku khaldamin taas, wada hadaladani way adkaan karaan. Caadi ahaan, waxay ka dhigan tahay dib-u-noqosho doorar maaddaama waalidkeen ama kuwa kale ee aannu jecel nahay ay door weyn ka ciyaareen barbaarinteenna iyo daryeelkeenna. Markay tahay qofka da'da yar markiisa inuu siiyo fursado daryeel qof da 'ah oo da' weyn, labada dhinacba waxaan isku arkaa meel aan la aqoon.
Nasiib wanaagse, waxaa jira qaabab loo maro wada-hadalkan hab ka dhigaya qof walba sida ugu macquulsan. Marka ugu horeysa, xusuusnow inaad lahadleyso wadahadalkan sababta oo ah waxaad daryeesho qofka aad jeceshahay, waxayna kaa caawinaysaa inaad u sheegto qofka aad la hadlaysid sababtaas darteed waxaad u keenaysaa mowduuca.
Ka bilow hadalada "I"
Qaabka ugu fudud ee lagu jabin karo barafka waa in laga hadlo arin laxiriira oo aad horay uqabtay. Waxaa laga yaabaa inaad qaadato dhowr daawo oo waad la wadaagi kartaa taas mararka qaar way adag tahay in la xasuusto inaad qaadato. Ama waxaa laga yaabaa inaad dhawaan ka sii dartay dhabarkaaga oo aad kala hadli karto iyaga sida ugu wanaagsan ee ay u fiicantahay in la helo qof halkaas jooga oo kaa caawiya howlaha guriga ama kuu kariyo markii lagu seexiyo. Ama waxaad si fudud u oran kartaa, "Waxaan kaa walwalsanahay adiga hooyo, waxaana kaliya oo aan doonayaa inaan hubiyo inaad sameyso wax caadi ah markaynaan ag joogin."
Madaxbanaanida waa wax aan dhamaanteen qiimeyno, marka ma jirto wax ka agdhaw xaqiiqda ah in kuwa aad jeceshahay ay rabaan inay ku dhaganaadaan kooda. Waad ka shaqeyn kartaa tan adoo u sheegaya waalidiintaada gaboobay inaad ogtahay inay karti u yeelan karaan naftooda inay daryeelaan, laakiin waxaad noqon laheyd mid aad u raaxo badan haddii aad ogtahay inuu jiro qof u jooga inuu caawiyo. Waxaad sidoo kale qiraysaa madaxbanaanidooda waxaadna u sheegi kartaa inaad doonayso inay awoodaan inay si madax banaan ugu noolaadaan guriga inta ay awoodaan.
Xul daqiiqad sax ah
Wadahadalka aad la leedahay qofka aad jeceshahay waa inuu noqdaa mid ka soo horjeedka faragelinta. Fikrad ahaan, waxaad dooneysaa caawimaad kuwa aad jeceshahay inay gaaraan gunaanadka naftooda in caawimaad yar ay meel fog gaari karto. Dooro waqti aamusnaan leh iyo markaad u maleyneyso inaysan xishoon doonin. Haddii qof qoyskaaga ka mid ah uu xiriir gaar ah oo sokeeye la leeyahay qofka aad ka walwalsantahay, way fiicnaan kartaa in loo qoondeeyo qofkaas inuu yahay kan wadahadalka la yeelanaya.
Haddii aad maanka ku hayso adeeg, waxaa ku caawin kara inaad keento buug-yare ama waxyaabo kale oo aad kula wadaagi karto qofka aad jeceshahay (tusaale ahaan, waad daabacan kartaa Cunnada ku saabsan buug-yaraha ama emayl [email protected] hadaad jeceshahay inaan mid dirno). Haddii qofka aad jeceshahay uusan weli hubin inuu helo adeegyo marka aad wadahadleyso, waxaad weydiisan kartaa isaga ama iyadu inay eegaan qalabka oo aad u sheegto inaad gadaal kala socon doonto.
Noqo qof dabacsan
Haddii kuwa aad jeceshahay aysan hubin inay helaan caawimaad, ogeysii inay tijaabin karaan haddii aysan jeclaynna, way joojin karaan helitaanka adeegga. Taasi waa habka Barb Kuklock iyo qoyskeeda ay ula qaateen hooyadeed Elaine markii ay kala hadlayeen sidii loogu heli lahaa Cuntada Lugaha. Markii ay wada sheekaysanayeen in ka badan 8 sano ka hor, Elaine waxay u sheegtay inay iyadu isku dayi doonto, tan iyo markaasna si farxad leh ayay u heli jirtay cunnooyin. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida Barb iyo qoyskeeda ay ugu dhawaadeen mowduuca Elaine.
Oggolaanshaha caawimaadda ma ahan wax sahlan midkeenna, laakiin haddii aad ula timaaddo wadahadalka naxariis, waxaad u badan tahay inaad ogaan doonto inay ka fiicantahay sidii aad moodeysay. Haddii kuwa aad jeceshahay ee sarsare ay ka baqayaan inay waayaan madax-bannaanidooda, waxay ku farxi karaan inay ogaadaan inay jiraan adeegyo la heli karo oo ka caawiya inay si farxad iyo caafimaad leh ugu noolaadaan guriga.
Diisambar 30, 2014